Linus Torvalds gbawara ọzọ na ndepụta nzipu ozi, oge a ọ bụ na mgbochi ogwu | Site na Linux
Ọchịchịrị | 11/06/2021 16:35 | Emelitere ka 11/06/2021 21:40 | Noticias
Laịnọs Torvalds bụ onye okike nke Linux na enweghị obi abụọ otu n'ime mmadụ kacha mara amara n'ụwa nke mepere emepe ọ dịkwa mma ikwu na nke a enyeghị ya otuto ọ nwere ma na-esoro mmụọ ọjọọ ma na-adịkarị arọ n'ụzọ, ebe ọ bụ n'ọtụtụ oge ọ nweela ọtụtụ esemokwu ma ndị mmepe kernel, yana ndị si n'ọtụtụ mba (nke a bụ ihe gbasara Nvidia).
Usoro esemokwu a Ọ bara uru na ya maka otu oge iji kwupụta arụkwaghịm nwa oge ya dị ka Linux kernel development nhazi (na 2018), ebe ọ bụ na nkwusioru nke mmepe bụ ọchịchọ ịtụgharị uche ọrụ ha na obodo ma nwee oge iji mụọ okwu metụtara ịghọta mmetụta nke ndị mmadụ na mmeghachi omume kwesịrị ekwesị na ọnọdụ esemokwu.
Anyị aghaghị iburu n'uche nke ahụ Linus kwa, bu onye na udi otua anyi puru ihie uzo ma o di nma ịrịọ mgbaghara Ma ọ bụ n'ihi na ọ rịọrọ mgbaghara maka mmekọrịta chiri anya na ịzaghachi oke iwe na mmejọ na mmejọ nke ndị ọzọ.
Ebuputara echiche ndị a site na mmejọ nke Linus na mmeghachi omume nke obodo na mmejọ a.
Linus mehiere ọnọdụ na oge nke Linux Linux Kernel Maintainer Summit wee mee atụmatụ ezumike ya na ezinụlọ ya n'oge a. Linus kwuru na ya ga-anabata ọgbakọ ahụ na-enweghị ya, mana ndị nhazi ahụ tinyere onwe ha n’ọnọdụ Linus wee tụọ vootu ka ha si na Vancouver gaa Edinburgh ka ọ nwee ike ịga nzukọ ahụ na-akagbughị njem ezinụlọ ya.
N'agbanyeghị mgbalị ndị a ịgbanwe omume gị na ọnọdụ esemokwu, Linus Torvalds alaghị azụ ma nwee mmeghachi omume ọzọ n'ụzọ siri ike megide "mgbochi ogwu" ndị mmadụ ndị na-arụ ọrụ na mmepe nke kernel Linux.
Ma ọ bụ na Linus Torvalds gbalịrị izo aka n’uche ịgba izu ọjọọ ma mesie arụmụka ndị na-ekwekọghị gaa na nnọchite sayensị mgbe ị na-ekwu maka ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID 19, n'ihe gbasara ogbako ndị na-emepe emepe kernel na-abịanụ (na mbido, e kpebiri na a ga-enwe ọgbakọ ahụ na ntanetị, dịka afọ gara aga, mana enwere ike ịtụle ịmeghari mkpebi a na ihe omume nke mmụba na nkezi nke ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi).
Linus ji nkwanye ugwu gwa ya ka o kwuru idebe echiche ya ("SHUT ELELL UP"), emela ka ndị mmadụ ghọgbuo, ekwulakwa okwu nzuzu pseudoscientific.
Dabere na Linus, ịnwa ịgbasa "ụgha nzuzu" gbasara ọgwụ mgbochi ọrịa na-egosi naanị enweghị agụmakwụkwọ ma ọ bụ ọchịchọ ịnara okwu ịgha ụgha na-enweghị isi n'aka ndị charlat bụ ndị onwe ha amaghị ihe ha na-ekwu.
Ka ịghara ịbụ ihe ndabere, Linus gosipụtara n'ụzọ zuru ezu ihe bụ ụdị njehie ahụ nke ndị kwenyere na ọgwụ mgbochi mRNA nwere ike ịgbanwe DNA mmadụ.
You maghị ihe ị na-ekwu, ị maghị ihe mRNA bụ, na ị na-agbasa ụgha idiotic. Ma eleghị anya, ọ na-eme ya n'amaghị ama, n'ihi nkwanye ùgwù. Eleghi anya ị na-eme ya n'ihi na ị gwala "ndị ọkachamara" ma ọ bụ vidiyo YouTube nke ndị charlatans amaghị ihe ha na-ekwu.
Ma nwanu, n'agbanyeghi ebe i nwetara ihe omuma gi, ihe omuma nkata Linux obula agaghi ekwe ka nzuzu nzuzu gi gabigara m.
Ọgwụ mgbochi egbochila ndụ ọtụtụ nde mmadụ.
Naanị maka iwuli elu gị ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịdị nwayọ - mRNA agbanweghị usoro mkpụrụ ndụ ya n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụ otu ihe ahụ dị n'etiti (na nke na-adịru nwa oge) nke mkpụrụ ndụ gị na - emepụta n'ime oge niile dịka akụkụ nke usoro sel sel ha na ọgwụ mgbochi mRNA niile bụ ịgbakwunye otu usoro nke usoro nke ha nke na - eme ka igwe ha dị mma cell na koro protein otú ahụ gị na-amụta ịmata ya.
Anyi aghaghi ighota na mmeghachi omume nke Linus Torvalds adighi ezi, ma o nwekwara isi okwu, ebe o bu na o na-akwanyere mkpebi ndi ozo ugwu ma ha choro ka a gbaa ha ogwu, ihe adighi nma bu mgbe ndi ozo gbaliri njirimara nke ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Linus Torvalds gbawara ọzọ na ndepụta nzipu ozi, oge a ọ bụ na mgbochi ogwu
Zaghachi Daniel Eugenio García
Ana m arịa ọrịa mgbochi ogwu, AKWUDKWỌ AKWUCKWỌ !!!! kwụsị nsogbu
ọ na-a cabụ ụlọ dijo
Ezigbo olulu: rara onwe gị nye kernel linux. Ekwula okwu n'amaghi ... mana o putara na o rere ihe pere mpe nke mmadu o debere na ochichiri.
Zaghachi na chupa cabaras
Ezigbo nne ewu:
Ekwadoro m ka m laghachi na agụmakwụkwọ mahadum. Na ebumnuche nke icheta ihe ndị bụ isi dị ka acids nucleic dị iche iche na ọrụ ha.
Google na-ekwu na AI ya na-agba ọsọ ọsọ